Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada » Isku Dhaca Badan Ee Lamaanaha Waxey Ka Faaidaan Arimahaan Oo Kale “Tusaalaha Qiso Dhab Ah”.
Marka hore ilaahay hanaga koriyo mashaakilka badan ,aqaladeenana ha ka nabadgeliyo shaydaanka kan insiga iyo Jinnigaba. Mashaakilaadka qoyska waa wax dhacaya oo guri walba taabanayaa, mararka qaarkiisna waa lama huraan, waana sida kaliya labada isqabtaa ay ku bartaan ayna ku ogaadaan qofka kale dabeecadiisa.
Mar allana markuu ogaanshaha iyo is aqoonsashada uu kordho, waxaa wanaagsnaada xiriirkii iyo isku soo dhawaanshaha labada is qaba. Markay labada is qabtay heshiiyaan (markay in mudo ah kalla aamusnaayeen oo qof waliba madaxa dhinaca kale sariirta u jeedinaayey), waxaa dhalanayo xiiso dheeraad oo qadarin ku dheehan oo ka dhadhan mac tii hore oo aad moodid inaad hada kaliya aad is guursateen.
Maxaa yeelay aqoontii ayaa korodhay oo qof walba wuxuu dhibsanaayay oo caloosha ku hayay banaankuu soo dhigay iyo qof walibana wuxuu ogaanaa inuu qofka kale ka deeqtooneen.
Waxaa muhim ah in labada isqabtaa dhexdooda ay isla xaliyaan ayna iska ilaaliyaan in arintooda dibada u baxdo oo ayan ku murmin dad kale hortooda gaar ahaana caruurta ay dhaleen. Waxaa kaloo wanaagsan in markuu dhib jiro dhibaatada jirta ay wajahdaan oo ay yareeyaan magac isku yeerista iyo calaacalka. Maxaa yeelay, hadii aad waajahdid xaaskaaga oo cay iyo calaacal aad gasho, waxbana makuu kordhinayso (Mindi calool gashay maxay u gashay lama yiraahdo, sideen u daaweynaa baa la yiraahdaa).
Waqtiga aad wada hadlaysaana waxaa waa inuu ahaadaa waqti qof walba degan yahay oo uu nastay oo aan caraysnayn. Gaar ahaan raggu waxay u baahan yihiin waqti intay ka dagayaan si uu uga soo kabsado tacabka maalinta markuu guriga soo galo.
Tusaale fiican waxaa i noo ah sheeko dhab ah oo ka dhacday dalka Kuwait. Waxaa jirtay gabar ninkeeda ay is qabeen mudo 5 sanadood ay ogaatay in ninkeeda uu khiyaanayo oo uu xiriir la yeeshay gabadha khaddaamada ee guriga ka adeegta oo ah ka yimid dawladaha Aasiya.
Gabadhii furka ma tuuranin ismana xanaajin oo way fakartay siday uga hortagi lahayd dhibka foosha xun oo jira ayadoon reerkeeda burburin.
Waxay weydiisatay walaasheeda (umana sheegin waxa jira) inay gabadha khaddaamada laba maalmood ay gurigeeda la joogto. Ninkeeda baa guriga soo galay, markuu nastay uu shaah weydiistay, ayadaana u keentay mana ka waalin. Markaasuu wuxuu yiri aaway gabadhii khadaamada ahayd maanta?, Waxay ku tiri gabadhii maanta aad ayay u xanuunsatay, dhakhtarkaan u geeyay, markey baareena waxay ogaadeen in gabadha cudurka AIDska ay qabt, Ninkii meesha ayuu ku naxay oo gurigaa ciriiri ku noqday.
Markaasa waxay tiri, guriga walaashayda aan uga soo tagay tikid ayaana u soo gooyay, baasaboorkeeda isii si ay u dhoofto. Ninkii orod ayuu cusbitaalka ku tagay inuu isbaaro, waxaa layiri wax ma qabtid, laakiin tawbo run ayuu tawba keenay oo ilaahay ayuu usoo noqday, gabadhiina waa dhooftay.
Markaad fiiriso, gabadhani mashaakilka jira ayay waajahday. Markuu guriga soo galay haf kuma dhihin, shaah ayay u keentay, wuu cabay ilaa uu asaga sheekada ka bilaabo, wayna ku guuleysatay inay ninkeeda ilaah u tawba keeno oo ceebtiisana banaanka ay u bixin.
1. Khibrada labada is qabtaa way kordhaysaa, taasna waxay u suuro galinaysaa in marka kale ay diyaar u yihiin iyo mustaqbalkana ay ayaguba dad kale dhexdhexaadiyaan. Ha noqoto caruurta ay ayaga dhaleen, asxaabtooda ama reerkooda dad ka mid ah. Xitaa markaa fiirisid sheekada kor xusan, khibrada ay xaaska yeelatay mudada shanta sanadood ay is qabeen ayaa u suuro galisay inay si xirfad leh u xaliso mashaakilkeeda. Bad degan Badmaax fiican ma soo saarto.
2. Waxay ogaanayaan dabeecadaha reerka labada is qaba ay ka dhasheen sida soomaalida ku maahmaahdo Tol waa hal la qalay (Tol qof fiican iyo xunba waa leedahay). Tusaale ahaan ninkii wuxuu ogaanaa in gabadha hooyadeeda ay tahay wax garad oo ay si wanaagsan ay u wajahday arinta. Ama wuxuu ogaanaa in hooyada ay celcelis tahay oo islamarkiiba gabadhayda sedexdeeda halkaan ii soo dhig ku soo booday. Sidoo kale gabadha wiilka reerkiisa ay ku baranee, mustaqbalkana waa ka digtoonaanayaan.
Waxaan ku soo gabagabaynayaa akhristayaasha kobciye.com waano ku socota walaalahayga Soomaaliyeed rag iyo dumarba gaar ahaana dhalinyarada guurka ku cusub ama ku tala jira in ay guursadaan taaso ah:
W/Q Bazi Bussuri Sheikh..
Haweenka Iyo Siday U Quursadaan Ragga “Akhriso Sheeko Cajiib Ah Oo Ka Turjumeyso Quursiga Dumarka”..